Xog Muhiim ah: Sicir Bararka Dhabta ah ee Maciishadda Magaalada Hargeysa. | Hargeysa World~Herald
GanacsigaXog Muhiim ah: Sicir Bararka Dhabta ah ee Maciishadda Magaalada Hargeysa.
Magaalada Hargeysa waxaa laga dareemaya korodh ku yimi maciishadda. Waxaanay saamaysay dadkii danyarta ahaa ee nolosha hoose ku noolaa. Waxaana meel adag maraysa nolosha quutal daruuriga iyo qiimahii lagu kale iibsanaayey.
Xildhibaanada Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shalay walaac ka muujiyey sicir-bararka ku dhacay maciishaddii dalka.
“Waxaa la marayaa xalaad qofkii mushahar soo qaatay wixiisiina aanay waxba uga goynin”, waxaa yidhi xildhibaan Guruje oo Maanta warbaahinta la hadlay.
Wadanku maanta waxa uu marayaa meel aad u sarraysa sicir bararkii, dawladuna ilaa hadda maykeenin wax lagu xakamayn karo.
Dawladuhu waxay inta badan sameeyaan talloobooyin wax-ku-ool ah oo lagu xakamaynayo sicir bararka sida in shacabka loo qaybiyo lacag caddaana, in maciishadda cashuurtooda hoos loo dhigo iyo in ganacsatada la taageero si sicir bararka loo xakameeyo.
“korodhka qiimaha maciishadda iyo qalabka dhismaha in dhowaalahan aad buu kor ugu kacay, waxaana sabab u ah in Magalaada Hargeysa aad looga dareemo, dadka ku nool caasimadda oo aad u badan iyo alaab xaddi geedu badanyahay ayaa inta badan Caasimadda lagu kale iibsadaa” Mustafe faarax oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhaqaalaha ayaa isaga oo ka hadlayaa sicir bararka sida u sheegay MM Somali Tv.
Hddaba haddaan soo qaaano qiimaha maciishadda kal-hore 2020, waxay ahaayeen sidan, sonkor 50kg $24, daqiiq 50kg $20, bariis 50kg $26, baasto 10kg $7, iyo saliid 20L $17. Halka manta ay marayaaan waxaa u dhexeeya farqi aad u sarreeya. Waxaanay qiimayaashoodu kale yihiin sidan, sonkor 50kg $33, daqiiq 50kg $27, bariis 50kg $28, baasto 10kg $9, iyo saliid 20L $32.
Halkaasna waxaa kaaga muuqda faraqa iyo kor u kaca aadka u sarreeya ee maciishadda Magaalada Hargeysa.
Fiiro Gaara: Hargeysa Herald kale soco warar sugan oo ku saabsan guud ahaan Caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland.